Ciyaaraha Jadwalka Archives - CasinoAdvisor.eu
Red Dog waa ciyaar caan ah oo kaararka ah, sidoo kale loo yaqaan 'High Card Pool'. Kasiinooyinka qaarkood sidoo kale waxay u magacaabaan Yablon iyo Ace-Deuce. Ciyaarta waxaa la ciyaaraa inta u dhaxeysa 3 ilaa 10 ciyaartoy. Ku cayaaray dhaqanka oo ka kooban 52 kaar. Ciyaartoydu waxay sharad kula jiraan jajab ama lacag ku saleysan helitaanka. Ciyaaryahanka leh kaararka darajada sare ayaa ku guuleysta… Continue reading Red Dog
Kala sooc sida Games Table
Faacuu Gow turub
Pai Gow turub waa ciyaar turubka caanka ah, sidoo kale loo yaqaan Double Hand Poker. Waa nooca la cusboonaysiiyay ee Shiinaha Pai Gow. Fahamka Pai Gow turubka waxa uu noqon karaa xoogaa dhib badan, si kastaba ha ahaatee, marka aad fahanto in aanay dib u soo noqonayn. Haddii aad ku cusub tahay khamaarka oo aad rabto inaad wax ka barato Poker Pai Gow, markaa… Continue reading Faacuu Gow turub
Blackjack (Wazdan) Dib u eegis
Dib-u-eegidgan waxaan ku tuman doonnaa ciyaarta Blackjack-ka ee Wazdan. Guud ahaan ciyaarta kaarkaani waa mid ka mid ah kulamada ugu caansan ee loo yaqaan casino. Markaad ka ciyaarto ciyaarta Blackjack-ka ee ka socota Wazdan, waxaad ogaan doontaa inay tahay isku darka xirfadda iyo nasiibka taas oo ciyaarta ka dhigaysa mid xiiso iyo xamaasad leh in la ciyaaro, xitaa haddii ay yar tahay ... Continue reading Blackjack (Wazdan) Dib u eegis
Blackjack waa mid ka mid ah ciyaaraha miiska ugu caansan ee casinos-ka internetka. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in ciyaartan casino ay fududahay in la barto. Intaa waxaa dheer, ciyaartan casino waxaa loo yaqaanaa qiimaha sare ee RTP (Ku Laabo Ciyaaryaha), celcelis ahaan tani waa 95.5%. Tan waxaa la ogyahay in mustaqbalka fog… Continue reading blackjack
Horeba waa ciyaar casri ah oo qadiimi ah, sida ku xusan sheekooyinka, roulette wuxuu dib ugu soo laabtay 1655. Roulette waa ciyaar la heli karo, waxay qaadataa waqti yar in lagu barto dhammaan sharciyada. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonnaa sharciyada ciyaarta, ereyo caan ah oo ciyaarta ka mid ah waxaanna kugu wargalin doonaa talooyinka iyo istaraatiijiyadaha. Kuwa ugu caansan… Continue reading roulette
Ciyaar casino ah oo leh taariikh hodan ah, baccarat wuxuu ku dhowaaday xitaa in ka badan roulette. Baccarat wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Talyaaniga waxaana markii dambe lagu soo bandhigay Faransiiska illaa 1483 - 1498. Baccarat waxaa badanaa lagu ciyaaraa Yurub iyadoo la adeegsanayo magaca punto banco. Ciyaartaan loo yaqaan 'casino' macnaheedu maahan qof walba inuu yaqaan, kuwa jecel James… Continue reading Baccarat
Laga yaabee in badankood aan la aqoon, laakiin sic bo waxaa sidoo kale loo yaqaan dai siu ama tai sai, tarjumaadda dhabta ah ee loo maleynayo dhagaxyada. Sic Bo wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Koonfur-bari Aasiya waxaana maalmahan sidoo kale si ballaaran loogu bixiyaa casinos-ka internetka. Asal ahaan, sic bo waxaa keenay muhaajiriinta Mareykanka horaantii qarnigii 20aad, halkaasoo where Continue reading SIC Bo
Khadka tooska ah ayaa caan ka ahaa Yurub sanado badan. Dabcan waa wax aad u fiican in la ciyaaro ciyaar turub ah oo lala yeesho asxaabta ama aad ka qayb gasho tartan turub ah oo ku yaal casino. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale haysataa xulasho badan markay tahay turubka internetka. Tusaale ahaan, kaarka fiidiyowga ka ciyaar qamaarka internetka… Continue reading Khamaarka qadka
Craps waxay umuuqan kartaa ciyaar camiran oo adag marka ugu horeysa, qaasatan markaad fiiriso dhamaan xulashooyinka sharadka. Xaqiiqdii, Craps waa ka sahlan yahay sidaad markii hore u maleyn lahayd, gaar ahaan markaad baratay xulashooyinka kala duwan ee sharadka. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa craps-ka khadka tooska ah ee khadka tooska ah. Kulankaan, jajabyada… Continue reading Craps
Dad badan ayaa isku dayi lahaa samirka, sidoo kale waa mid ka mid ah ciyaaraha horay loo sii daayay ee Windows. Ingiriisiga sidoo kale waxaa loogu yeeraa solitaire maxaa yeelay waxaad kaligaa ciyaareysaa. Waa ciyaar aad ugu habboon in lagu dhex ciyaaro. Waxa dad badani aysan aqoon waa inaad hadda sidoo kale ku ciyaari kartaa dulqaad khadka tooska ah online Continue reading Sabirku
Bogga ugu weyn » Games Table